व्यवसायीक दक्षता हाँसिल गरेका नेपाल द्वितीय उपाध्यक्षका उम्मेद्धार | .:: Welcome || Paryatannews
Home » मुख्य समाचार » व्यवसायीक दक्षता हाँसिल गरेका नेपाल द्वितीय उपाध्यक्षका उम्मेद्धार
व्यवसायीक दक्षता हाँसिल गरेका नेपाल द्वितीय उपाध्यक्षका उम्मेद्धार
पर्यटनन्यूज, काठमाडौं । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ् नेपाल (टान)को आगामी आइतबार हुने निर्वाचनमा ऋषिप्रसाद नेपालले द्वितीय उपाध्यक्षका रुपमा उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् ।
नवराज दाहाल नेतृत्वको समूहमा रहेर उनले उम्मेद्वारी दर्ता गराएका हुन् । उनी यस अघि कार्यसमितिको सदस्य रहेका थिए । गंगाजमुना हिमालको काखमा रहेको धादिङ, फुलखर्कमा जन्मिएका नेपाल २००७ देखि २००९ को टान कार्यसमिति सदस्य थिए ।
सन् १९९९ फेब्रुअरीमा पोर्टर, टे«किङ गाईड र मेनेजर हुँदै हाल उनी ईन्काउन्टर्स नेपाल डटकम प्रालिका प्रवन्ध निर्देशक हुन् भने टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकका संस्थापक तथा शुभकामना ईङलीस बोर्डिङ स्कुलका व्यवस्थापन समिति अध्यक्षसमेत रहेका छन् । उनी पर्यटन सम्बद्ध विभिन्न गतिविधि गर्दै आएको काठमाडौं ईन्भाईरोमेन्टल एजुकेसन प्रोजेक्ट (कीप)का सचिव पनि हुन् । माउन्टेन एक्सकर्सन र समाजसेवामा विशेष रुचि राख्ने नेपाल समन्वय, व्यवसायीक दक्षता र मार्केटिङमा बढी तल्लीन हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । गाउँबाट आएको एउटा कोरा मान्छेले टानजस्तो गरिमामयी संस्थाको द्धितिय उपाध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी दिनु नै आफ्नो जीवनको सर्वाधिक उपलब्धि भएको उनको भनाइ छ । उनले अमेरिका, बेलायत, अस्टे«लिया, चीन, भुटान र युरोपका विभिन्न देश गरी झण्डै साढे दुई दर्जन मुलुक भ्रमण गरिसकेका छन् । पर्यटनन्यूजसँगको छोटो कुराकानीमा नेपालले पदयात्रा पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्न प्रचारप्रसार र व्यवसायीक दक्षता अभिबृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताए । टानका कर्मचारीहरुसंग समन्वय गरि सरकारी निकायका साथै पर्यटनका अन्य निकायहरुसंगको सम्बन्धलाई थप उचाईमा पुर्याउने उनको लक्ष्य छ ।
व्यवसायीक दक्षता हाँसिल गरेका नेपाल द्वितीय उपाध्यक्षका उम्मेद्धार Reviewed by Shiva Shrestha on Oct 26 . पर्यटनन्यूज, काठमाडौं । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ् नेपाल (टान)को आगामी आइतबार हुने निर्वाचनमा ऋषिप्रसाद नेपालले द्वितीय उपाध्यक्षका रुपमा उम्मेद्वारी दर्ता ग पर्यटनन्यूज, काठमाडौं । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ् नेपाल (टान)को आगामी आइतबार हुने निर्वाचनमा ऋषिप्रसाद नेपालले द्वितीय उपाध्यक्षका रुपमा उम्मेद्वारी दर्ता ग Rating: 0